Khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal wasaare Rooble oo weji cusub yeeshay | Warbaahinta Ayaamaha
Khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal wasaare Rooble oo weji cusub yeeshay
MUQDISHO-AYAAMAHA-Khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo), iyo Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ayaa weji cusub yeeshay kadib markii uu Madaxweynaha wareegto xalay ku magaacabay taliyihii shaqa joojinta lagu sameeyay ee Fahad Yaasiin oo uu ka dhigay la-taliyihiisa amniga qaranka.
Warqad ka soo baxday xafiiska raysal wasaare Rooble ayuu ku muujiyay walaaciisa la xiriira tallaabada u qaaday madaxweyne Farmaajo. waxaa warqadda lagu qoray:
“Ra’iisulwasaaruhu ka walaacsanyahay talaabooyinka uu qaaday Madaxwaynuhu in ay yihiin kuwa lagu carqaladaynayo in si dhammaystiran looga gungaaro kiiska Ikraam Tahliil Faarax oo horay hay’adaha Cadaaladda iyo sharciga looga hor-istaagay in ay baaris buuxda ku sameeyaan Kiiskaas.”
“Ra’iisulwasaaruhu wuxuu u arkaa wax laga xumaado in Xuquuqda Muwaadin Soomalaiyeed la siyaasadeeyo taas oo ah dhaqan halis ku ah hannaanka dowladeed ee Dalka waana in ay ka waantawdo cid kasta oo ku fikiraysa arrinkaas.”
Maxamed Xuseen Rooble ayaa warqadda qoraalka ah ku tibaaxay inuu ku adkeysanayo in Xeer-ilaalinta iyo Maxkmadda Ciidammada Qalabka Sida ay dardargaliyaan hawlaha Baarista kiiska Ikraam Tahliil Faarax deg degna u hor geeyaan maxkamadda awoodda u leh.
“Waxaa la farayaa dhammaan taliyayaasha Ciidamada Qalabka sida in ay si buuxda ugu gacansiiyaan Xeer-ilaalinta Ciidamada iyo Hay’adaha Sharcigu in ay gutaan waajibadka ka saaran arrintaan.” ayuu warqadda lagu sheegay
Rooble ayaa hay’adaha Amniga faray inay adkeeyaan amniga iyo xasilloonida guud ee dalka, ilaaliyaan Xuquuqda Muwaadiniinta, isla markaana ka feejignaadaan tilaabo kasta oo wax u dhimi karta Xorriyaadka iyo xuquuqaha aasaasiga ah ee dadwaynaha Soomaaliyeed.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa Isniintii shaqo joojin ku sameeyay Fahad Yaasiin oo sanadihii dambe ahaa agaasimaha hay’adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA.
Dowladda Somalia oo qarisay xaqiiqda tirada dhimashada COVID-19 ee Soomaaliya.
Doorashada Golaha Shacabka ee Gobalada Waqooyi oo dhowaan la bilaabi doono.
Dagaalkii maalmahaan ka socday duleedka Muqdisho oo lasooafjaray.
Maxaad ka ogtahay qorshaha dahsoon ee Soomaaliya lala damacsansan yahay?
Tababar loo soo xiray Ciidamo sugaya Amniga doorashada Golaha Shacabka
DEG DEG Weerar ismiidaamin ah oo Lala eegtay Saraakiil Ajanabi...